1-Ka fogow xaaladaha
Xaalad walba oo wal wal galinaysa naftaada iyo jismigaaga ka fogow, xaaladaha qaar dib waa loo hagaajin karaa balse naftaada mar haddii ay qarribanto xanuunkeeda iyo dib usoo noolaynteeda lama sixi karo, sidaa darteed, ka fogow xaaladaha aan naficga u lahayn naftaada.
2-Ma is waydiisay?
Ceebtaada maxay tahay ma is waydiisay, dambigaada muxuu yahay ma is waydiisay, shaqadaada maxay tahay ma is waydiisay, maxaa kula gudboon ma is waydiisay?
1. Dadka waxaa tustaa wanaagaaga balse waad is ogtahay xumaantaada iyo ficil shaydaan samayntaada marka aad kali noqotid!!!
2. Cibaadadaada way badantahay ,baryadaada Allena waa badantahay, hadana iimaankaaga waa daciif, macnaheeda waa in cibaadadaada aysan toosnayn.!!!
3. Dadka waa u naxariis badantahay si dagana waad ula hadashaa, laakin qoyskaaga iyo ehelkaaga waad u adagtahay una hadal xumayn badantahay.
4.. Waad sharaftaa martidaada, si wanaagsana waad ula dhaqantaa, balse marka ay kaa tagaan ayaa xantooda gurtaa, yaa tahay bal is eeg!!?
5. Saddaqada waad la baxdaa, masaakiintana waad caawisaa, balse waa ku mannad sheegataa, waana dhaawacdaa, saddaqadaada maxay tahay is waydii?.
6. Habeenkii ayaa tukataa, aqrinta quraankaaga way badantahay, waa soontaa, hadana xiriir lama lihid qoyskaaga.!!!!
7. Asxaabtaada waa la kaftantaa balse marka aad kala tagtaan ayaad caysaa, inkaartaa, daba marayna ku samaysaa.
8. Dadka caawintooda waxaad u samaysaa si aad wax uga heshid ama laguu sheeg sheego oo kaama ahan Alle dartiis!!!!
9. Dadka ayaad waanisaa, waddada wanaagsana waad u tilmaantaa, waxaas oo dhana waxaad u samaysaa halagaa sheego, inta aad sheegaysana ma samaysid, mana ku dhaqantid, taas macnaheedana waa naftaada in aad qayaantid!!
Waad heli kartaa qof kuu shaqeeyo oo waxa aad rabto kuu qabto, waad samaysan kartaa nolosha qaabka aad u rabto marka aad awoodeeda leedahay, wax walba oo nolosha loo isticmaalo haddii ay lumaan dib ayaa loo heli karaa ama waa la meelayn karaa baddalkooda, balse nolosha marka ay lunto maxaa lagu meelayn karaa? waa waxba, nolosha ilaali waa muhiim.
Gudcurku wuu qarin karaa geedaha iyo ubaxyada qurxoon, balse waxba kama qarin karo qalbiga, gaar ahaan Jacaylka.
Qalbiga wuxuu leeyahay luuqado u gaara ah wuxuuna garan karaa kumanaan qaab oo uu ugu hadli karo luuqaddo uu markaas doonayo!
7-Jaahil vs Aqoonyahan.
Jaahilku wuxuu ka caroodaa hadalkiisa, aqoonyahnkana wuxuu ka caroodaa ficilkiisa!!!.
Waxaa jira rag fara badan oo ayaga oo u qalmin af duubtay quluubta dumar fara badan, ma ahan quruxda oo kaliya ee waa qaabka hadalka wanaagsan waxa lagu hanto qalbiyada dumarka qaaliga ah.
Taariikhda oo aadan aqrin micnaheda waxay ka dhigantahay in laabtaada ay wali caruurtahay, sidaa darteed, waa muhiim in aad taariikhda aqriso, taariikhda oo si fiican u baratid waa khibrad kuu siyaada, waxayna ka dhigantahay aqrinta ama saadaalinta mustaqbalka.
Qofka marka uu Mar walba wax ka cabsanayo wuxuu taagnaanayaa meesha uu joogo, sababtana waxay tahay in uusan awood u lahayn wajihidda xaqiiqda hortaalo.
Kalsoonida iyo guusha
Kalsoonida waa dariiqa guushaada, laga yaabee in mararka qaar in aysan horseed u noqon guushaada, balse, waxay ku siisaa awood aad kaga hortagi karto caqabad kaste.
Waqtiyada ugu fiican noloshaada waa waqtiyada aad jeceshahay in qofna aadan la wadaagin oo kaligaa ay kugu ekaato ilaa maalinta Qiyaamaha, maxaa yeelay waa ku qaali noloshaada oo ma jeclid in aad qof la wadaagto.
16-Dulmiga dadka la dulmiyo
18-Haweenta loo baahan yahay.